Uninstaller | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label Uninstaller. Show all posts
System software uninstall 1.6 apk
ကိုယ့် Android ဖုန်းထဲက မလိုချင်၊ အသုံးမလိုတဲ့ App တွေ System App ဖြစ်နေလို့ ဖျက်လို့ မရရင်
ဒီ App နဲ့ ဖျက်ထုတ်နိုင် ပါတယ်.. ကိုယ့်ဖုန်းက Root ဖောက်ပြီး သားတော့ဖြစ် ရပါမယ်.. သတိပေး
ချင်တာက မဖျက်ခင် Back အရင်လုပ်ထားပါ ကိုယ်ဖျက်လိုက်တဲ့ System App က ဖုန်းမှာ တကယ်
လိုအပ်တဲ့ System App ဖြစ်နေခဲ့ရင် Restore ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့ သတိထားရပါမယ်..
A key to unload system useless program (requires root permission).
Have any questions please message, everyone is really good!
Tips: professional uninstall 30 years, you deserve to install
Updated : February 25, 2014
Size : 210k
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, February 08, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Uninstaller
Easy Uninstaller Pro - Clean v2.3.3 apk
မိမိတို့ ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေကို လက် အညောင်းခံ၊ အချိန် အကုန်ခံပြီး
တစ်ခုချင်းစီ ဖျက်ဖို့ မလိုအောင် ပြုလုပ်ပေးမယ့် easy uninstaller prov 2.2.8 ဆော့ဝဲလေးဖြစ်
မိမိဖျက်ချင်တဲ့ ဆော့ဝဲတွေ ကို select ပေးပြီး One click လုပ်ရုံနဲ့ ပယ်ဖျက်ပေး သွားမှာ ဖြစ်ပါ
တယ် …စက်ရုပ်ဖုန်းတွေ အတွက် သွင်းထားတဲ့ ဆော့ဝဲတွေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ မြန်မြန်ဆန်
ဆန် ဖျက်ပေးနိုင်မယ့် tool တစ်ခု ဆိုရင်လည်း မမှာပါဘူး….
ဒါ့အပြင် ဆော့ဝဲ တစ်ခုရဲ့ name,version,update time,size စတာတွေလည်း ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်
ပါတယ် Updated သုံးချင်းတဲ့ ဘော်ဒါတို့ အောက်မှာ ဒေါင်း နိုင်ပါတယ်။…
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို Android 2.1 အထက် ဖုန်းတွေမှာ သုံးနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
▼ zippyshare.com ▼
ကဏ္ဍ Android, Cleaner, Phone Application, Uninstaller
AV Uninstall Tools Pack 2014.12 | 143.57 MB
AV Uninstall Tools Pack –afree package of tools designed to remove antivirus and security software. It includes tools for removing more than 40 antivirus and antispyware programs and firewalls – firewalls. If you need to completely remove the virus, so he did not leave traces in the system, use the package utilities AV ninstall Tools Pack. Utilities for removing antivirus needed in those When it is not possible to completely remove the antivirus program in the standard way, or in the process of removing errors. These utilities completely remove all files, drivers, services and registry entries left by antivirus programs. These tools will be useful for those who often deals with reinstalling and configuring the software. Note that some tools are not intended for use asaprimary means of uninstalling. Before using them, try uninstalling the program in the standard way. If the antivirus findsavirus in files. For programs of this type is quite normal, as they, for example, forcibly terminate processes antivirus, eject and remove drivers, etc. We regularly send messages false alarms in the virus laboratory.
– Add AVG Remover 2015 (x86 and x64)
– Add Panda 2015 Uninstaller
– Add Quick Heal 16 Removal Tool
– Updated Avast Antivirus Removal Tool to version 10.0.2202.670
– Updated Dr.Web Remover to version 10.0.0.11130
– Updated Emsisoft Clean to version 1.2.0.58
– Updated ESET Uninstaller
– Updated F-Secure Uninstallation Tool to version 3.0.2670
– Updated Kaspersky Password Reset Tool (add support 6.0, 7.0 and 2015)
– Updated KAV Removal Tool to version 1.0.731
– Updated MBAM Cleanup Utility to version 2.1.1.1001
– Updated McAfee CleanUp Tool to version 7.6.133
– Updated Norton Removal Tool to version 22.0.0.20
– Updated Total Defense Internet Security Suite Removal Tool
– Updated Titanium Uninstaller to version 8.0
– Updated ZoneAlarm Removal Tool to version 13.4.56.0
– Removed Spy Sweeper Consumer Cleanup Tool
– Removed ZoneAlarm Secruity toolbar uninstaller
Max Uninstaller 3.0.2.1487 | 4.47 MB
– 1-click uninstall any unwanted or corrupted programs completely with ease
– Fix program install errors and corrupted install/uninstall error messages
– Clean out all remnants including leftover registry entries and program drivers
– Show detailed information ofacertain program installed in your computer
– Provide intuitive and easy-to-use interface to uninstall/fix program errors
– Resovle any difficult program uninstall by 24/7 dedicated technical support!
– Easy to use 1-click scan and powerful uninstall capability
– Compatible with all Windows operating systems including Windows 7, Vista, XP and 2000
Home Page - http://maxuninstaller.com/
ဖုန်းထဲက Root တွေကို ပြန်ဖျက်ပေးမဲ့ Root Uninstaller Pro v7.2.249 Apk
ဖုန်းထဲက Root တွေကို ပြန်ဖျက်ပေးမဲ့ Root Uninstaller Pro ဗားရှင်း အသစ်လေးပါ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးနဲ့ အသုံးပြု
ရတာလွယ်ကူလို ပြန်တင်ပေး လိုက်ပါတယ် အောက်မှာဒေါင်းပါ ။
Root Uninstaller Pro v7.2.249 Apk | 809 KB | Resumable Links | Requires Android:2.0.1 and up |
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, December 14, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Root, Uninstaller
Root App Delete - VIP v7.2.2 apk
Android Phone + Tablet တွေအတွက် System APP တွေကို ဖျက်ချင်ရင် ဒီဆော့ဝဲ လေးကို ဆောင်ထား
လိုက်ပါ။ ဒီဆော့ဝဲလေး ကတော့ မိမိ မနှစ်သက်တဲ့ System app တွေကို ဖျက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
-နောက်ထွက်တဲ့ Huawei 610,730 တွေမှာ တစ်ချို့ original software တွေက သုံးလို့ မရပါဘူး။ မျက်စိ
နောက်တာပေါ့။ အဲဒီတော့ ဒီဆော့ဝဲလေးကို ထည့်ပြီးတော့ မိမိ မကြိုက်တဲ့ System app တွေ ဖျက်လို
ဒီဆော့ဝဲကို သုံးဖို့ အတွက် မိမိဖုန်းက Root ဖောက်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကြိုက်တယ် ဆိုရင်အောက်မှာ
▼ usersfiles ▼ OR ▼ solidfiles ▼
From : ဘလော့ခရီးသည် by Win Hlaing
Max Uninstaller 3.0.2.1465
Max Uninstaller 3.0.2.1465 | 3.96 MB
Active@ UNERASER 8.0.0
Active@ UNERASER 8.0.0 | 27.30 MB
မိမိ ကွန်ပြူတာမှာ မလိုချင်တော့လို့ ဖျက်ခဲ့တဲ့ ဖိုင်တွေ ဖေါ်ဒါတွေကို ပြန် အသုံးပြုချင်လို့ (သို့မဟုတ်) ပြန် လို
ချင်တဲ့ အခါမှာ ဒီဆော့ဝဲလေးကို သုံပြီး ပြန်လည်ရယူ နိုင်ပါတယ်။
အခြားဝန်ဆောင်မှုတွေလည်း ပါဝင်တာမို့ အောက်မှာ ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
Active@ File Recovery9– tool to recover deleted files and folders (Graphical User Interface);
Active@ Boot Disk Lite – Windows 7-based environment including set of recovery tools (UNERASER, File Recovery and others);
Home Page – www.lsoft.net/uneraser.aspx
From: Cyber2day.com by M@gic™
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, November 19, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Recover, Undelete, Uninstaller
Smart PC Solutions Express Uninstaller 2.2.0.0 DC 22.09.2014 | 2.27 MB
When you uninstall an application using the standard windows add / remove programs there are often junk files and registry items left behind. Uninstalling with Express Uninstaller is the safe, easy and fast way to completely remove the application along with all leftover files.
– Fast and easy way to completely remove unwanted software programs
– Remove corrupt or unresponsive programs
– Track and remove leftover files, folders and registry entries
– Stop unnecessary programs from automatically loading at start up
– Free up valuable disk space and keep your computer running smoothly
From: Cyber2day.com by Speed_Up
ကဏ္ဍ Remover, Uninstaller
Max Uninstaller 3.0.1.1452 + Key
မိမိတို့ ကွန်ပြူ တာ ထဲမှာ မလိုတော့တဲ့ Software တွေကို ရှင်းထုတ်ချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် အလွယ်ကူ
ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင်ပေးမယ် ဆော့ဝဲလ်လေးကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးက ဝမ်း
ကလစ် တစ်ချက်တည်းနဲ့ ဖိုင် error တွေက အစ အစအန မကျန်အောင် ရှင်းထုတ်ပေးမယ့် ဆောင်ထား
သင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေးပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 4Mb ရှိပြီး ဝင်းဒိုးအားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
From: Pyae Phyo (MMiTD) by oakkarmin thailand
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, November 08, 2014 No comments:
IObit Uninstaller v4.0.4.30
ဒီကောင်းလေး ကတော့ လူတိုင်း သိကြ ပါတယ်နော် စက်တိုင်း လိုလို မှာလည်း ရှိကြမယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ
ဗားရှင်း အသစ်လေး တွေ့လို့ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဒီ IObit Uninstaller v4.0.4.30 ကတော့ စက်ထဲမှာ install လုပ် ထားတဲ့ ဆော့ဝဲ များကို မလို ချင်တော့
ရင် အလွယ်တစ်ကူ uninstall လုပ်ပေး နိုင်ပါတယ် အခု တင်ပေး လိုက်တဲ့ IObit Uninstaller v4.0.4.30
လေးက အရင်ဗားရှင်းတွေနဲ့ မတူပဲ နည်းနည်းပြောင်းလဲလာပါတယ် ဘာမှတော့ သိပ်မဟုတ် ပါဘူးဗျာ။
style လေးပဲ ပြောင်းလာတာပါ ။
ကဲဗျာ မလိုချင်တော့တဲ့ ဆော့ဝဲ တွေကို uninstall လုပ်မယ် ဆိုရင် IObit Uninstaller v4.0.4.30 ကတော့
အကောင်းဆုံး ပဲဗျာ ဒီကောင်းလေးနဲ uninstall မှသာ စက်ထဲမှာ ဘာမှ မကျန်အောင် အပြီး ရှင်းထုတ် နိုင်
ပါတယ်နော် အသုံး မပြုချင်တဲ့ ဆော့ဝဲတွေ ရှိရင် စက်အလေးခံပြီး ထားမနေ ပါနဲ့ဗျာ ဒီ IObit Uninstaller
v4.0.4.30 လေးနဲ့ ရှင်းထုတ် လိုက်ပါနော် အောက်မှာ ယူသွား လိုက်ပါနော် ။
▼ play store ▼ (OR) ▼ zippyshare ▼
From : ဘလော့ခရီးသည် by ရဲဝေလင်း လေ့လာသူ
Glary Utilities Pro 5.9.0.16 Portable and Keys Full version
Glary Utilities Pro ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံလေးကတော့ ကွန်ပြူတာမှာ မလိုအပ်တဲ့ System Error တွေ Register Error
အပါအ၀င် အခြားသော Error တွေကိုလည်း Clean and Repair လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ပြီးတော့ Disk Cleaner
လည်း လုပ်ပေးနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
Uninstall လုပ်တဲ့ Software တွေက အကုန် မပျက်တဲ့ Software တွေ ရှိတတ် ပါတယ်။ အဲဒါတွေက များလာတဲ့
အခါမှာ Hard Disk မှာနေရာ လွတ်တွေ မကျန်တော့ပါဘူး။ အဲဒါ ဆိုရင် ဒီကောင်လေး နဲ့ Clean လုပ်ပေး လိုက်
တယ်ဆိုရင် နေရာလွတ်တွေ ရလာနိုင် ပါတယ်။ ပြီးတော့ Uninstall ဆိုတဲ့ Function လည်း ပါဝင်ပါ တယ်။
Add or Remove Program နဲ့ Remove လုပ်လို့ မရတဲ့ Software တွေကို Glary Utilities Pro နဲ့ Uninstall
လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားသော Function များစွာလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်ဗျာ။
ဒီ Version ကိုတော့ Full ဖြစ်စေရန် Portable and Key ထည့်ပေး ထားပါတယ်။
From : ဝင်းကမ္ဘာကျော် by Win Hlaing
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, October 01, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Cleaner, PC-TuneUp, SystemCare, Uninstaller
Uninstall Tool 3.4 Build 5354 Final (x86/x64) Full Version Free Download
Home Page – http://www.crystalidea.com/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, September 11, 2014 No comments:
Max Uninstaller Pro 3.0.0.1 + Serial [Multilingual]- (4.29 Mb)
Uninstaller ဆော့ဝဲတွေ ထဲမှာ အမြန်ဆုံးနဲ့ အသန့်ရှင်းဆုံး Uninstall လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလေး တခုပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်သေး
-ပေမဲ့ အခြား Uninstaller ဆော့ဝဲတွေထက် အလုပ် လုပ်တာ ပိုပြီးသပ်ရပ်ပါတယ်။
Display Hidden Program
Max Uninstaller is able to find out every program installed in your computer, even the program is corrupted, incomplete, or does not show up in Add/Remove program.
Perform Complete Removal
Max Uninstaller uninstalls anything you want completely, it removes all files, folders, and registry entries/keys that associated with the target program once for all.
Remove Stubborn Toolbar
Max Uninstaller provides effective solutions that helps removing various annoying toolbars that does not display in Add/Remove program or hard to be uninstalled.
Convenient Uninstall Process
Unlike normal tedious uninstall procedures, users only needsafew clicks and Max Uninstaller will finish uninstalling any program they want automatically.
version 2014 3.0 improved IE9fix
From : ဘလော့ခရီးသည်
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, August 28, 2014 No comments:
Uninstall Tool 3.4 Build 5353 Final (x86/x64) Free Download
Uninstall Tool 3.4 Build 5353 Final (x86/x64) | 6.19 MB
- Automatic check for updates (optional) and new version dialog with ‘what’s new’ list
- Program preferences are always saved to the ‘preferences.xml’ file (located in CSIDL_APPDATA\_CrystalIdea Software\_Uninstall Tool)
- Google for program name (Ctrl+G) and its publisher (see ‘Action’ menu)
- Uninstaller cache is now saved to ‘CachedData.dat’ file (located in CSIDL_APPDATA\_CrystalIdea Software\_Uninstall Tool). One can manually refresh the cache by simply pressing the Refresh button in the toolbar (F5)
- Company column to display item’s publisher/author
- Google for program name (Ctrl+G), .exe name and publisher (see ‘Action’ menu)
- Better way of handling situation when there’re no items in the list
Downlaod link: Uninstall Tool 3.4 Build 5353 Final (x86/x64) ( 6.19 MB )
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, July 28, 2014 No comments:
Total Uninstall Pro 6.4.1 Multilanguage (x86-x64) With Patch Full Version
မိမိ ကွန်ပြူတာမှာ အသုံး မလိုတဲ့ ဆော့ဝဲ တွေကို အမြစ်ပါ မကျန် စက်ထဲ ကနေ မောင်း ထုတ်ဖို့ အတွက် တိကျ ခိုင်မာတဲ့
uninstaller ဆော့ဝဲ ကောင်းကောင်း ရှိဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
Add Remove program ထဲကို ၀င်ရောက်ပြီး ဖျက်ပေးဖို့ မလိုတော့ ပါဘူး။ ဒီကောင် လေးကို ဖွင့်ပြီး ကိုယ်မလို အပ်တဲ့ ဆော့
၀ဲကို နှိပ်ပြီး uninstaller ကိုနှိပ်ပေး လိုက်ရုံနဲ့ အဆင်ပြေ ပါတယ်။
files, folders, registry keys and values program စသည့် ဖိုင်တွေ အကုန်လုံးကို မိမိ လိုသလို uninstall
and remove လုပ်ယူနိုင် ပါတယ်။ Total Uninstall လေး ကတော့ powerful ဆော့ဝဲလေး ပါပဲ။
Full ဖြစ်စေဖို့ အတွက် Patch လေးကို ထည့်ပေးထား ပါတယ်။
ဒီကောင်လေး ကိုတော့ Window (x86-x64) bits တွေမှာ ကောင်းကောင်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
From: ဘလော့ခရီးသည် by Win Hlaing
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, July 22, 2014 No comments:
Easy Uninstaller Pro - Clean v2.2.8 for android (latest version)
မိမိတို့ ဖုန်းပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့ ဆော့ဝဲတွေကို လက်အညောင်းခံ၊ အချိန် အကုန်ခံပြီး တစ်ခုချင်းစီ
ဖျက်ဖို့ မလိုအောင် ပြုလုပ်ပေးမယ့် easy uninstaller prov 2.2.8 ဆော့ဝဲလေးဖြစ်ပါတယ်။
မိမိဖျက်ချင်တဲ့ ဆော့ဝဲတွေ ကို select ပေးပြီး One click လုပ်ရုံနဲ့ ပယ်ဖျက်ပေး သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စက်ရုပ် ဖုန်းတွေ အတွက် သွင်းထားတဲ့ ဆော့ဝဲတွေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပယ် ဖျက်ပေးနိုင်
မယ့် tool တစ်ခု ဆိုရင်လည်း မမှာပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဆော့ဝဲတစ်ခုရဲ့ name, version, update time, size
စတာ တွေလည်း ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလေးကို Android 2.1 အထက် ဖုန်းတွေမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
From: Pyae Phyo (MMiTD) by Win Hlaing
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, May 25, 2014 No comments: